CABDIQAASIM OO KU EEDEEYAY XUKUUMADDA GALAEYR FASHILAAD
Sida ay qortay maanta jariidada Al-Khaliij ee luqada carabiga,kana soo baxda dalkan Imaaraadka, Waxaa uu Madaxweynaha Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan si weyn ugu eedeeyay Dawladda KMG ee uu madaxda ka yahay Cali Khaliif Galaydh inuu ku guuleysan kari waayay barnaamijkiisii boqol maalmood ahaa ee uu hore u ballanqaaday , isagoo Madaxwenaha ku caddeeyay hadalkiisii in ceebaha dawladda kmg ay noqdeen iminka kuwa ay dad badani arkayaan.
Waxyaabaha uu Madaxweynaha soo qaatay waxaa ka mid ah in Dawladda KMG ay xitaa ku fashilantay dabagalka iyo soo ururinta lacagihii ay dawladaha aanu walaalaha nahay iyo kuwa saaxiibka nala ah ugu deeqeen Jamhuuriyadda Soomaaliya, furitaanka Safaaradihii Soomaaliyeed ee hore u xirmay , soo saaridda Baasaboorada cusub iyo dhismaha Hay'adaha Dawladda .
Wuxuu kaloo ku eedeeyay in Dawladda KMG ay ku guuleysan kari weyday sugidda amniga Caasimadda Muqdisho iyo Gobolada dalka. Waxaa kaloo jira in Wargeyska Sanca cadadkiisii ka soo baxay shalay (4th June) Muqdisho uu daabacay fariin uu Cabdiqaasim Salaad ugu sheegay Ra'iisul Wasaaraha sida ay lama huraan ugu tahay in miisaaniyad joogto ah loo qoondeeyo Ciidamada Booliiska , si loo sugo amniga , iyo in mashruucyada dib-u-dhiska ee Wasaaradda Hawlaha Guud tixgelin gaar ah la siiyo .
Sidoo kale, Wasiirka Arrimaha Dibedda Ismaaciil Maxamuud Hurre (Buubaa) ayaa isna ku eedeeyay in Raiisul Wasaaraha uusan haba yaraatee la kulmin in muddo ah Golahiisa Wasiirada, sidaas darteedna uu mas'uul ka yahay guul-darada soo gaartay Xukuumadda, gaar ahaana dagaalada ka dhacay dhowaan Caasimadda iyo amni la'aanta jirta guud ahaan .
Ugu danbeyntii waxay kaloo Jariidada Al-Khaliij ku xustay warkeeda in shan qof oo midi ay haween tahay ay geeriyoodeen kadib markii bas ay saarnaayeen oo u jeeda degmo ka tirsan gobolka Hiiraan, kana soo baxay Muqdisho dorraad ay niman dabley ah tacshiiradeeyeen.Waxay kaloo iyana sheegtay miino ku qaraxday gaari marayay xaafadda Hodan ee isla magaalada Muqdisho.
Translated by Banadir.com